-eme nchọgharị na	"Kratom"	Category
09 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 6 Comments
Gịnị bụ iwu ọnọdụ nke Kratom na Arizona State dị ka nke 2014? Kratom eji na Arizona n'ike n'ike na-amụba, na a ọtụtụ ndị nwere ajụjụ banyere otú dị mma, iwu, ma dị irè ogwu bụ. Ndị a...
09 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 0 Comment
Ịgbalị iji chọpụta ma ma ọ bụ na Kratom bụ iwu iji na North Carolina? Iwebata nke Mitragyna Speciosa ogwu n'ime US ahịa n'ezie nanị malitere n'ime afọ iri gara aga na nke a mere ka ụfọdụ ...
Gịnị bụ Virginia Iwu na Sale nke Kratom?
09 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 3 Comments
Ugbu a, Kratom bụ iwu na unregulated na steeti Virginia nakwa ihe ka ọtụtụ nke USA. Ma n'oge na-adịbeghị, omeiwu anọwo na-anwa ime ka ọ na-esiwanye ike ka Kratom ngwaahịa iwu ....
Nwere ike ị na-azụ Kratom na New Jersey n'iwu?
Kratom Fans na New Jersey kwesịrị-enwe obi ụtọ ịmata na nke a ọzọ ọgwụ ogwu bụ iwu na ha kwuo. Kratom epupụta sitere si Asian Mitragyna Speciosa osisi na-enye ọtụtụ uru ...
Ọ bụ iwu ka Zụrụ Kratom na Michigan na Detroit?
08 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 2 Comments
Ejighị n'aka dị ka ma i nwere ike na iwu ịzụta na-eji Kratom akwukwo na ngwaahịa na Michican ma ọ bụ obodo Detroit? Ugbu a, na abụọ nke 50 U.S. States-amachibido iji ihe Kratom, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-ekwu ...
Zụrụ Kratom n'iwu na Portland & Oregon ahịa
08 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 1 Comment
Kratom na ọtụtụ ndị na-iji na-emeso ịda mbà n'obi, nchegbu, opiate ndọrọ ego, na ihe mgbu, na ina iji ya na-aghọ nnọọ dị ukwuu dị ka ina ime ka botanical n'uzo na ezighi ezi. Ebe ọ bụ na Oregon gbara ...
Ị nwere ike Zụrụ Kratom na Pennsylvania ọ bụ Ola?
07 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 2 Comments
Pennsylvania na n'ezie e amakụ ọzọ ike na ngwaahịa na-adịbeghị anya na otu n'ime ndị eke botanicals mara dị ka Kratom akwukwo. Kratom bụ ogwu na bụ nwa afọ na Southeast Asia na rere ...
07 Mar 2014 Ihe site Lyndon Reys 1 Comment
Kratom bụ eke ogwu na e na-a otutu nke bu na ọtụtụ US na-ekwu. Ọtụtụ ndị nọ Illinois-echebara echiche ma ha ala ga-ekwe ka ha na-uru nke iji nke a ukwuu chọrọ ...
Zụrụ High potency Kratom Full ụdịdị dị iche iche na-anọrọ wepụ (FSIE)
29 Jan 2014 Ihe site Lyndon Reys 0 Comment
Abụọ okwu na i nwere ike na-abịa gafee gị nnyocha na Mitragyna Speciosa bụ "Kratom anọrọ" na "Full ụdịdị dị iche iche na-anọrọ Wepụ". Ezie na ọtụtụ ndị mgbere na-eji okwu ndị a, ole na ole na-enye a zuru ezu ngwaahịa ...
Olee otú iji gbochie Kratom ọgbụgbọ, Isi ọwụwa & Ntachi
Olee otú Long Ọ Kratom Ikpeazụ
Ọ bụ iwu na-Zụrụ Kratom na UK?